Green Airlines dia miankina amin'ny Airxelerate amin'ny teknolojia distrubution
Home » Lahatsoratra farany farany » Aviation » Green Airlines dia miankina amin'ny Airxelerate amin'ny teknolojia distrubution
Aviation • Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao • Tourism • Dinika fizahan-tany • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao isan-karazany
Green Airlines dia miankina amin'i Airexcelerate
Calisto dia manampy ny kaompaniam-pitaterana an-tserasera hanokatra tsena vaovao haingana amin'ny sehatry ny fivelaran'ny orinasam-panamoriana. Ny Calisto Distribution Platform dia manolotra ny mpanamory fiaramanidina avo lenta sy azo zahana.
Ny Platform dia namolavola rafitra fanaraha-maso mifototra amin'ny rahona sy varotra izay manompo ny fantsona rehetra momba ny varotra dia.
Ity sehatra fizarana ity dia ampiasain'ny kaompaniam-pitaterana iray voalohany.
Calisto dia hanampy ny Green Airlines hanokatra tsena vaovao haingana amin'ny sehatry ny fivelaran'ny orinasam-panamoriana.
Ny rafitra fizarana fiaramanidina vaovao Calisto Distribution Platform dia ampiasaina ihany koa ao amin'ny Green Airlines. Ny zotram-pitaterana an'habakabaka dia manompo toera-pialan-tsasatra maro avy any Paderborn sy Rostock-Laage ary manidy ny banga amin'ny fandaharam-potoanan'ny sidina fizahan-tany miaraka amin'ny drafitra sidina mafonja. "Ny rafitray dia hifanaraka amin'ny fitomboan'ny zotram-piaramanidina ary hanome fantsom-pivarotana fizahan-tany marobe," hoy i Nina Sifi, Tale mpitantana ny Airxelerate.
Miaraka amin'ny Calisto Distribution Platform ho an'ny tsenan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, ny fanombohana Berlin dia namolavola rafitra mifehy sy varotra mifototra amin'ny rahona izay manompo ny fantsona rehetra momba ny varotra dia. Calisto dia mandray ny fenitra teknolojia vaovao amin'ny varotra fiaramanidina toy ny NDC sy OneOrder.
Taorian'ilay mpivarotra zotram-piaramanidina International Carrier Consult, izay misolo tena ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka vahiny amin'ny tsena miteny Alemanina, ny sehatra fizarana Calisto izao dia ampiasain'ny kaompaniam-pitaterana tokana. “Green Airlines dia manolotra sidina ara-toetrandro any Eropa ary mampifanaraka ny tolotra fangatahana. Ny sehatra fivarotana azo refesina toa an'i Calisto dia fototra iray lehibe ho an'ny orinasantsika, hoy ny CEO Green Airlines Stefan Auwetter.
Teknolojia mora azo hanombohana ny sidina
"I Calisto dia manampy ireo kaompaniam-pitaterana hanokatra tsena vaovao haingana amin'ny sehatry ny fivelaran'ny sidina," hoy i Nina Sifi, lehiben'ny Airxelerate. Ny rafitra vao novolavolaina dia mamorona dingana mahomby amin'ny fitantanana varotra. Ny tombony dia toa ekena amin'ny tsena. "Mihamaro ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka sy mpandraharaha mpizahatany miresaka amintsika momba ny fampiasana azo atao amin'ny Calisto Distribution Platform," hoy i Sifi.
Momba ny Airxelerate
Airxelerate dia natsangana tao Berlin tamin'ny taona 2018. Ankoatry ny famolavolana ny vokatra Calisto azy manokana, ny orinasa dia mamorona vahaolana IT namboarina manokana ho an'ireo orinasam-pizahantany. Airxelerate dia mandresy ny fetra ara-teknika misy eo amin'ny seranam-piaramanidina sy ny fizahan-tany ary fahaiza-manao amin'ny fitantanana angona sy ny varotra. Miaraka amin'ireo rafitra mailaka sy haitao maoderina, ny vahaolana mifototra amin'ny rahona an'ny Airxelerate dia mampihena ny fahasarotana sy ny vidiny. Miorina amin'ny fahaizana am-polony taona maro, ireo mpanorina ny fanombohana Berlin dia mamaky làlana vaovao amin'ny haitao fitsangatsanganana.